Nadiifi: Iskugu keen Tabarucayaasha iyo Taageerayaasha Kubadda Cagta • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Nadiifi: Iskugu keen Tabarucayaasha iyo Taageerayaasha Kubadda Cagta
Subaxdii Sabti, Oktoobar 23, mutadawiciinta xaafadda iyo taageerayaasha kubbadda cagta oo ka kala yimid gobolka oo dhan ayaa wax ka qaban doona qashinka Dutchtown. Intaas ka dib, taageerayaasha waxaa lagu daaweyn doonaa ciyaaro saaxiibtinimo oo lagu qaado garoonka kubadda cagta iyo maxkamadda futsal-ka Beerta Marquette.
Tabarucayaashu waxay ku kulmi doonaan meel u dhow maxkamadda futsal -ka ee Gasconade iyo Virginia markay tahay 9ka subaxnimo. Biyo, cunto fudud, iyo qalab ayaa la bixin doonaa. Kooxdu waxay tagi doontaa baarkinka, iyo sidoo kale meelaha u dhow iyo luuqyada, si ay ugaadhsadaan qashinka. Annaga oo wata laba baabuur oo waaweyn iyo qashin -qubka magaalada, waxaan awood u yeelan doonnaa in aan soo kaxaynno wax kasta oo aad u waaweyn oo laga yaabo in laga helo jidka.
Deriska dhow waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka soo qeybgalaan ficilka iyaga oo nadiifinaya qeybtooda xaafadda. Hore u soo qaado qashinka, dib u nadiifi luuqadaada dib, ama samee qaar ka mid ah shaqooyinka dayrka si ay kaaga caawiso in xayndaabkaagu iftiimo.
Fursadaha Lacag -bixinta ee Ka -qaybgalka Dhallinyarada
Deriska da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 24 waxay kasban karaan $ 10 saacaddii ilaa siddeed saacadood markay soo baxaan oo ay ka caawiyaan dadaallada nadiifinta. Iimayl kicstlouis@gmail.com Ama wac (314) 265-6186 si loo diiwaan geliyo. Diiwaangelinta hore ayaa loo baahan yahay si loo helo lacag-bixin.
Nadiifinta ka dib, ciyaartoydu waxay duullimaadyada tegi doonaan duhurkii. Waxaa jiri doona fursado lagu soo qaado ciyaaraha, markaa xor u noqo inaad u timaaddo fursaddaada aad ku boodi karto. Barnaamijka ciyaaraha waxaa hoggaamin doona Umoja St. Louis Soccer iyo St. Louligans.
Umoja Soccer waxay qabanqaabisaa kooxo qaangaar ah waxayna la shaqaysaa dhallinyarada sidoo kale, u badan muhaajiriinta Afrika. The St. Soccer waxay taariikh dheer ku leedahay Marquette Park. Iyada oo la maxkamad cusub oo futsal ah oo ku taal Marquette Park, oo lagu dhisay si wadajir ah St. Louis CITY SC iyo shuraakada kale, waxaan rajaynaynaa inaan sii dhisno Dutchtown khariidada oo ah meel ay u tagaan ciyaartoyda kubbadda cagta iyo taageerayaasha.
St. Louis CITY SC Clinic Soccer Clinic
Ka sokow barnaamijka kubbadda cagta ee galabta, kooxda St. Louis 'MLS ayaa sidoo kale subaxdii gelin doonta rug caafimaad oo loogu talagalay dhallinyarada da'doodu tahay 5-12. Rugta caafimaadku waa lacag la'aan, laakiin diiwaangelin hore ayaa loo baahan yahay. Barnaamijku wuxuu soconayaa 9:30 am ilaa 11am.
Dadaalka nadaafadda ee ay mutadawacnimadu horseed ka tahay waxaa hormuud u ah Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown iyo SLACO (Ururka St. Louis ee Ururada Bulshada). Umoja St. Louis Soccer iyo St. Louligans hoggaami xafladaha kubbadda cagta ee galabta. Wada -hawlgalayaasha beesha ee dheeraadka ah waxaa ka mid ah Rabshadaha Daaweynta Dutchtown, Shirkadda Koonfurta ee Dutchtown, Guryaha Garcia, Gurung Bazaar, La Liga Laatiin Ameerika, Lou Fusz Ford, Kooxda Horumarinta Lutheran, Hindisaha Guryeynta ee St. Joseph, iyo Vitendo 4 Afrika.
Filimka hoos Beerta Marquette. Muuji dhamaan qeybaha. Nadiifinta, Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown, Iyo Beerta Marquette. Muuji qaybo yar.
DutchtownSTL.org Beerta Marquette Nadiifi: Iskugu keen Tabarucayaasha iyo Taageerayaasha Kubadda Cagta